မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ကျပ် (၃၈၆) သိန်းတန် ကားသစ်ကြီးကို လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ယုန်လေး – Swel Sone News
မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ကျပ် (၃၈၆) သိန်းတန် ကားသစ်ကြီးကို လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ယုန်လေးရဲ့မွေးနေ့မှာ ချစ်သူခင်သူတွေက မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ Birthday Party လေးတောင် လုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အမြဲတမ်းစိတ်သဘော ကောင်းပြီးကူညီတတ်တဲ့ ယုန်လေးကတော့ စေတနာရောင်ပြန်ဟပ်တယ်လို့ပဲဆိုရတော့မှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ။ မွေးနေ့မှာ Car Showroom တစ်ခုက သိန်း ၄၀၀ နီးပါး ကားသစ်ကြီးတစ်စီးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုအမိုက်စားကားကြီးက ကြွေချင်စရာပါ။
မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလို့ ယုန်လေးက ” BAIC ကို အထူးကျေးဇူးပါ။ မွေးနေ့မှာ 2019 . O ကီလို .X55 Sub BAIC ကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အတွက် Special Thank အစောကြီးထဲက လိုချင်နေတာ . ပိုက်ဆံနည်းနေလို့ ဒီတိုင်းလည်းတန်ပါတယ် 2019 အသစ်ကို 386 သိန်း။ Sky Line လေးလည်း ရောင်းစရာမလိုတော့ဘူး ” ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ မင်္ဂလာရှိတဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်စရာဆက်တိုက်ဖြစ်နေတော့ ထပ်ဆင့်မင်္ဂလာရှိသွားတာပေါ့နော်။
ခင်မင်ရသူတွေကလည်း အပြန်အလှန်စေနောက်ကြပြီး ပျော်စရာကောင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းခင်မင်မှုလေးကို အထင်းသားမြင်တွေ့ရပါတယ်။ ယုန်လေးတစ်ယောက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်လေးကြောင့် ပြုံးပျော်နေတဲ့ပုံစံလေးကလည်း မြင်ရသူတိုင်း ထပ်တူဝမ်းသာချင်စရာပါ။ ကားသစ်ကြီးနဲ့ကွီးယုန်လေးရေ Happy Birthday ပါနော်။
” မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ သိနျး (၃၀၀) ကြျောတနျ ကားသဈကွီးကို လကျဆောငျရခဲ့တဲ့ ယုနျလေး ”
ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ယုနျလေးရဲ့မှေးနမှေ့ာ ခဈြသူခငျသူတှကေ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့ကွပွီး ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ Birthday Party လေးတောငျ လုပျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ အမွဲတမျးစိတျသဘော ကောငျးပွီးကူညီတတျတဲ့ ယုနျလေးကတော့ စတေနာရောငျပွနျဟပျတယျလို့ပဲဆိုရတော့မှာပါ ပရိသတျကွီးရေ။ မှေးနမှေ့ာ Car Showroom တဈခုက သိနျး ၄၀၀ နီးပါး ကားသဈကွီးတဈစီးကို လကျဆောငျအဖွဈပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ တကယျ့ကိုအမိုကျစားကားကွီးက ကွှခေငျြစရာပါ။
မှေးနလေ့ကျဆောငျပေးလို့ ယုနျလေးက ” BAIC ကို အထူးကြေးဇူးပါ။ မှေးနမှေ့ာ 2019 . O ကီလို .X55 Sub BAIC ကို လကျဆောငျပေးတဲ့ အတှကျ Special Thank အစောကွီးထဲက လိုခငျြနတော . ပိုကျဆံနညျးနလေို့ ဒီတိုငျးလညျးတနျပါတယျ 2019 အသဈကို 386 သိနျး။ Sky Line လေးလညျး ရောငျးစရာမလိုတော့ဘူး ” ဆိုပွီး ကြေးဇူးတငျစကားပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ မင်ျဂလာရှိတဲ့မှေးနလေ့ေးမှာ ပြျောစရာဆကျတိုကျဖွဈနတေော့ ထပျဆငျ့မင်ျဂလာရှိသှားတာပေါ့နျော။
ခငျမငျရသူတှကေလညျး အပွနျအလှနျစနေောကျကွပွီး ပြျောစရာကောငျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သူငယျခငျြးခငျမငျမှုလေးကို အထငျးသားမွငျတှရေ့ပါတယျ။ ယုနျလေးတဈယောကျ မှေးနေ့ လကျဆောငျလေးကွောငျ့ ပွုံးပြျောနတေဲ့ပုံစံလေးကလညျး မွငျရသူတိုငျး ထပျတူဝမျးသာခငျြစရာပါ။ ကားသဈကွီးနဲ့ကှီးယုနျလေးရေ Happy Birthday ပါနျော။
Photo – Yone Lay
အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မယ်လိုဒီရဲ့ သားသားလေး
“မွနျမာအိုငျဒေါ ဆနျကာတငျစာရငျးမှာ ခငျြးလူမြိုးသုံးဦးပါလို့ ပြျောနတေဲ့ သကျမှနျမွငျ့”
အမအေရငျးတဈယောကျလို ခဈြရတဲ့ မို့မို့မွငျ့အောငျကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျကနျတော့ခဲ့တဲ့ မိုးအောငျရငျ
ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီး ဗိုက်လုံးလုံးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ မေမေသဉ္ဇာနွယ်ဝင်း